Ukuhluleka ukuqhubeka kahle kuyacasula – u-Amla
Ukuhluleka ukuqhubeka kahle kuphoxile emdlalweni wama-Standard Bank Proteas ngosuku lwesibili lomdlalo we-Test yesine bedlala ne-England e-Old Trafford e-Manchester ngoMgqibelo. Abadlali abashayayo abayisithupha phezulu – ngaphandle kwa-Dean Elgar – bonke baqale kahle, kodwa bahlulekile ukuqhubeka nezikhonkwana.
Oshayayo, u-Hashim Amla, uthi lokuhluleka ‘kuyacasula’ kulaba abashayayo, ababhekene nenye impi ngomphumela we-innings yokuqala engu-220/9 kushoda ama-runs angu-142.
“Ngathi bekwenzeka kuwona womabili amaqembu,” ekhuluma emuva komdlalo wosuku. “Abadlali baqale kahle kodwa bahluleke ukuthola ama-runs amaningi esijwayele ukuwabona. Kuyacasula, njengoyedwa wabadlali, wonke umdlali oqala kahle ufuna ukuqhubeka ngendlela efanayo, ngebhadi asikwenzanga lokho namhlanje. Abaphosayo baphose kahle, kumele ubancome abaphosayo. Ngijwayele ukubuka indlela esiphume ngayo ukubona ukuthi bashaye kanjani, ebengemaningi, ngakho kumele uncome abaphosayo.”
u-James Anderson uyena ohluphe kakhulu kwisimo sasekhaya waqeda eno-4/33, futhi esekelwe ithimba labaphosayo ebelinesimilo okunganikanga abashayayo ithuba lokukora.
“Baphosekahle abafana,” kusho u-Amla. “Ihamba kancane i-wicket, kuyashintshashintsha okwenza kubenzima ukukora. u-Moeen (Ali) wenze okucishe kufane no-Keshav (Maharaj) akwenzele thina, ukwazile ukubambelela futhi njengeqembu elishayayo awuhambi ne-run rate.”
u-Kagiso Rabada (23 not out) no-Duanne Olivier (0) bazoqhubeka ngosuku lwesithathu ngenhloso yokunciphisa ama-runs asele e-innings yokuqala. Umdlalo kumele uqale ngo-11h00.
Ama-Proteas abekelwe okunye ukushodelwa okukhulu kwi-innings yokuqala Maharaj uhamba phambili ekubekeni i-England phansi Ama-Proteas azimisele ekugcineni irekhodi elincomekayo u-Philander ubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo u-Elgar ushaye ikhulu lesishagalombili ngaphambi kokuthi i-England inqobe ngama-runs angu-239 -Elgar no-Bavuma bayayivimba i-England u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England Singawenza umthelela - u-Rabada